Imfundo Ephakeme kanye Nenguquko Yesine Martech Zone
Imfundo Ephakeme kanye ne-Foursquare Revolution
NgoMsombuluko, Okthoba 11, 2010 NgoMgqibelo, Septhemba 26, 2015 U-Adam Encane
Amanyuvesi akhahlela izinkundla zokuxhumana! Baku-Twitter, Facebook futhi baqala ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-geolocation njenge-Foursquare. Kungani lokhu kuzosebenza? Iningi labafundi abazoba khona bathatha izinqumo zokuthi bazofunda kuphi kuhambo lwasekolishi. Ngakho-ke ukwenza umbono omuhle phakathi nohambo lokuqala kubalulekile. I-Foursquare ivumela amanyuvesi ukuthi ahlole ikhampasi ngendlela entsha ngokuphelele. Isicelo singasetshenziswa ukushiya amathiphu wokuqinisekisa ukuthi amathemba ayazi ukuthi angaya kuphi nokuthi enzeni ngesikhathi sokuvakasha. Ezinye izizathu zokuthi amanyuvesi asebenzise izinhlelo zokusebenza ze-geolocation yilezi:
Yabelana ngamaqiniso amancane awaziwayo
Yabelana ngolwazi mayelana nezimpawu zomhlaba, izakhiwo namakheli
Imibuzo yekheli ngaphambi kokubuzwa (ukuphepha, ukuzula)
Nikeza imivuzo namabheji ukukhuthaza abafundi abasha ukuthi bahlole ikhampasi
Yabelana ngamasiko esikole
Yenza abafundi bacwiliswe emphakathini ngaphandle kwekhempasi
Thola izeluleko ezivela kubalandeli
Okunye ukusetshenziswa kwe-Foursquare ekusethweni kweyunivesithi kwenzelwa ama-alumni “ukuvakashela kabusha ikhampasi”. I-Foursquare ingabasiza ukuthi bathole ukuthi bekukwenzekani selokhu bathweswa iziqu. Isibonelo, i-alum izongena futhi ibone isakhiwo esisha. Isimo esingafani sendawo singabaluleka kwabanye abantu ababuyekeze iNyuvesi…. isikhathi sizotshela kulowo. Ukungeza kuleso sici uhlelo lokusebenza oluzobatshela injongo yokwakha entsha nomlando “omusha”. Kuyasiza i-alum ukuthi ihlale ixhunyiwe futhi ingazizwa ilahlekile.
IHarvard yisikole esisodwa esisebenzisa i-Foursquare. Banikela ngemininingwane yomlando nezinto ezimnandi ongazenza ekhampasi, ezingatholakala konke ku-Foursquare ngaphansi kwe- Harvard ikhasi. IHarvard University inamakhasi ambalwa ku-Foursquare yezakhiwo zayo eziningi.
Amanyuvesi ayaziwa ukuthi anemicimbi eminingi. Uhlelo lokusebenza oluhlukile lokusiza ukwabelana ngayo yonke le micimbi ngu WhrrlLolu hlelo lokusebenza luvumela abasebenzisi ukuthi bangene futhi balayishe izithombe nemiyalezo abazokwabelana ngayo ngalo mcimbi. Lolu hlelo lokusebenza lunamandla okuletha ndawonye abafundi abasha kanye nama-alumni. Baxhunywe ngokuhlangenwe nakho kwabo okwabiwe futhi bangabona ngesikhathi sangempela ukuthi kwenzekani emicimbini esekhampasi. Ngokuvumelana ne Mashable, ngoMeyi 2010, iSt. Edwards University yasebenzisa iWrrrl ukukhumbula umkhosi wayo wokuthweswa iziqu.
Esinye isisusa sokuthi amanyuvesi aqale ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-geolocal inani ledatha elingaqoqwa. Imininingwane ingakhombisa ukuthi yimiphi imicimbi ehanjelwa kakhulu, imininingwane yabantu, isiko lasekolishi futhi ingenza izinqumo ezinolwazi ngokususelwa kulokho abafundi abaphendula kukho. Izikhungo zemfundo ephakeme ezamukela izicelo ze-geoloaction zizoba ngaphambi kwalo mdlalo futhi zizokwazi ukuxhumana nabafundi bayo ngezindlela ezibalulekile.
Tags: imicimbi yasekolishiizenzakaloezinegeolocationamanyuvesiimicimbi yaseyunivesithi
Amagoli Wokuhola Wokuxhumana Komphakathi kanye Neziqu
Ukwamukelwa, Momentum, Ukunwetshwa
Jan 6, 2011 ngo-10: 05 PM
UKyle, ngiyabonga ngalokhu okuthunyelwe okuhle. Nginguchwepheshe wezokuxhumana ekolishi elincane lobuciko obukhulu eMorhead, eMinnesota (http://foursquare.com/concordia_mn). Asinabafundi abaningi abayisebenzisayo kepha sibheka izindlela zokwandisa abasebenzisi bethu futhi ngethemba lokuthi sizokuqasha ukuqashwa kwethu.
Uzibuza ukuthi ucabanga ukuthi kubaluleke kakhulu yini ukuba nezipesheli noma amathiphu ekhampasi? Kade sisebenza ukungeza amathiphu kepha sinenkinga yezindlela zokuhlanganisa ingxenye yesikhuthazo sikwele ezine. Ngabe uneziphakamiso?
Ngo-Apr 30, i-2012 ku-11: 04 AM
Ngiyabonga Kyle ngokuhlola amathuba okusebenzisa imithombo yezokuxhumana ngamaYunivesithi. Imfundo ePhakeme isezandleni zenguquko. Ingaphezulu nangaphezulu kwe-Information Technology kepha isuselwa kuLwazi, i-Knowmatics, i-Knowledge Processing Technology ne-Knowledge Industries.
'I-Knowmatics - Inguquko Entsha Emfundweni Ephakeme' Ijenali yeWorld University Forum 4,1,2011: 1-11 idingida ezinye zalezi zinkinga ngokujula ngaphandle kweMibono kaMathew Yokusebenzisa Ulwazi-Ukukhiqiza, i-Knowmatics kanye Nezimboni Zolwazi. Izinkinga ezihlobene nazo kubhekwana nazo http://www.slideshare.net/drrajumathew